Maxaa burburiyey heshiiskii uu Franck Ribery xagaagan ugu biiri lahaa kooxda uu aadka ugu dhowaaday ee Liverpool? – Gool FM
Haaruun July 28, 2019
(Liverpool) 28 Luulyo 2019. Sida wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa aad ugu dhowayd xagaagan inay la saxiixato xiddiga garabka ka ciyaara ee reer France, Franck Ribery.
36-sano jirkaan ayaa isaga dhaqaaqay naadiga Bayern Munich ee dalka Jarmalka kaddib markii uu ka dhammaaday qandaraaskiisii uu kula jogay, waxaana uu baadi-goobayaa koox cusub.
Wargeyska L’Equipe ee ka soo baxa waddanka Faransiiska ayaa shaaca ka qaaday in macallin Liverpool ee Jürgen Klopp uu isku dayey inuu laacibkan ka dhaadhiciyo inuu keeno garoonka Anfield.
Yeelkeede, waxaa warbixinta lagu sheegay in maadaama aysan xiddigo badan ka tagin xagaagan kooxda Reds uu tababare Klopp ugu dambeyn go’aansaday inuu haysto xiddigo uu uga maarno Ribery oo ku filan.
Liverpool ayaa haysata mid ka mid ah weerarka ugu halista badan kubadda cagta caalamka kuwaasoo kala ah Mohamed Salah, Sadio Mane iyo Roberto Firmino, waxaana intaas dheer Divock Origi oo u fadhiya, iyadoo sidoo kale kooxda Reds lagu soo daray da’yarta Rhian Brewster iyo Ryan Kent oo la filayo in fursaddooda la siiyo xilli ciyaareedka cusub.
Waxaa la rumeysan yahay in Ribery uu qibraddiisa ku aaddan waayihiisa guusha ku soo kordhin lahaa garoonka Anfield ee ay ka arrimiso kooxda reer England ee Liverpool.
Ribery ayaa 12-kii xilli ciyaareed oo uu ku sugnaa kooxda Bayern Munich waxa uu u dhaliyey 124 gool kaddib markii uu u saftay 425 kulan, waxaana uu ka caawiyey Munich ku guuleysiga sagaal koob oo horyaalka Bundesliga ah, hal koob oo Champions League ah iyo Lix koob oo German Cup ah.
Inkastoo uu burburay heshiiska uu ugu wareegi lahaa Liverpool xagaagan haddana waxa uu aamisan yahay Ribery inuu ugu yaraan xilli ciyaareed kale ku sii jiri karo garoomada kubadda cagta.
Paulo Dybala oo la soo sheegayo inuu go’aansaday halka uu ka ciyaari doono xilli ciyaareedka soo socda… (Miyuu ku biirayaa Man United?)